#7 Tantara any an-kafa…Any Alemana : Fahitsiana: Mpandefa fanairana iray tsy nanaiky handray ny loka mitentina 2 tapitrisa dolara satria nampilaza ny fisian’ny tsy fahatombonana eo amin’ny fitantanana ara-bola eo anivon’ny Deutsche Bank. - Transparency International - Initiative Madagascar
#7 Tantara any an-kafa…Any Alemana : Fahitsiana: Mpandefa fanairana iray tsy nanaiky handray ny loka mitentina 2 tapitrisa dolara satria nampilaza ny fisian’ny tsy fahatombonana eo amin’ny fitantanana ara-bola eo anivon’ny Deutsche Bank.
Nivoaka ny 07 Oktobra 2016 ao amin'ny Tantara any an-kafa
Eric Ben Artzi, mpandefa fampitandremana iray, rehefa nilaza ny fisian’ny tsy fahatombanana eo amin’ny fiandraiketana ny fitantananam-bola ao amin’ny Deutsche Bank, dia nandà ny handray ny loka mitentina 8.25 tapitirisa, 15 isan-jaton’ny fitambaran’ny sazy tokony alohan’ny Deutsche Bank nohon’ny fanafenan’izy ireo ny vola very nandritry ny krizy 2008. Ny fitsipika ao Etazonia dia ny manome loka ireo mpilaza fanairana izay hahafahan’ireo tompon’andraikitra miady amin’ny hosoka.
I Eric Ben Artzi dia mpandalina ireo loza mety hisy amin’ny fitanam-bola eo anivon’ny Deutsche Bank. Tamin’ny 2011 dia voaroaka ny tenany rehefa nampilaza ny tompon’andraikitra eo amboniny mahakasika ny tsy fahatomombanana eo amin’ny fiandraiketana ny fitantanam-bola eo anivon’ny banky. Taorian’nizay dia nampahafantatra ny SEC izy mahakasika ny fanafenan’ny banky alemana ireo vola very nandritry ny krizy 2008. Araka izany ny SEC dia nanatontosa fanadihadiana izay niteraka ny sazy mitentina 55 tapitrisa dolara.. Fa I Eric Ben Artzi kosa dia tsy nety nandray ny lokany!
Tao anatin’ny taratasy izay nivoaka tao amin’ny gazety aratoekarena britanika “Financial Times”, dia nanazava ny anton’ny fandavany izy: “ Tsy te handray anjara amin’ny fangalarana ny hafa izay natao ho arovako aho”. “Tsy handray ny anjarako aho. Ireo mpitantana (NDLR: Deutsche Bank ) dia efa lasa nisotro ronono miaraka ami’ny vola aman-tapitrosany. Mandiso fanantenana hoe ireo mpiara-miombon’antoka indray no sazian’ny SEC fa tsy ireo mpitantana izay tena tompon’andraikitra” hoy hatrany izy. Ary koa, nangataka izy ny hanomezana ny anjarany hoan’ireo hianjadian’ny loza naterak’ity raharaha ity. Ny Deutsche Bank tokoa dia tsy maintsy nametraka planina fanavaozana amin’ny alalan’ny faminavinana ny hanidy sampana manodidina ny 200 ao Alemana hatramin’ny 2020 ary hanafoana asa miisa 9000 maneran-tany. Araky ny heviny hatrany, nandritry ny fisian’ireo tranga ireo, ny SEC dia nalefaka tamin’ny Deutsche Bank. Arak’izany hoy izy dia misy amin’ireo mpitantana ny banky miasa ho an’ny SEC taloha.
I Transparency International dia mangataka ny fiarovana araky ny lalàna ireo mpilaza fanairana, amin’ny alalan’ny fanarahana akaiky ireny olona ireny izay amin’ny ankapobeny very asa ary misedra fahaterena ara-psikolokija.
Raha te handeha lavitra:
Lahatsoratra ao amin’ny Financial Times (teny anglisy) https://www.ft.com/content/c5059fd2-6881-11e6-ae5b-a7cc5dd5a28c
Lahatsoratrin’ny Parisien (teny frantsay) http://www.leparisien.fr/economie/l-homme-qui-a-refuse-8-m-de-recompense-21-08-2016-6057471.php
Toerana misy an'i Transparency International mahakasika ny mpandefa fanairana:
Amin’ny fiteny anglisy : https://www.transparency.org/topic/detail/whistleblowing
Amin’ny fiteny frantsay : https://transparency-france.org/lanceurs-dalerte/
Tantara any an-kafa
ARAHO IZAHAY AO AMIN'NY